September 2020 - Padaethar
ဝမ်းသာစရာ သတင်းကောင်းပါ…ရန်ကုန်က အိုကေတော့မှာပါ…
September 30, 2020 by Padaethar
ဝမ်းသာစရာ သတင်းပါ ရန်ကုန်အဆင်ပြေစပြုနေပြီနော်… ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ရောဂါသက်သာလို့ လူနာထောင်ဂဏန်းလောက် ဆေးရုံကနေ ထပ်ဆင်းမယ်… ဝမ်းသာဖို့ကောင်းတာက အိန္ဒိယက လှူဒါန်းထားတဲ့ ကိုဗစ်ကုသဆေးကလဲ တော်တော်လေး အလုပ်ဖြစ်တယ်…. ရန်ကုန်က အိုကေတော့မှာပါ…သွေးရည်ကြည်ကုထုံးရယ် အိန္ဒိယက လှူဒါန်းထားတဲ့ဆေးရယ်ပေါင်းစပ်လိုက်တော့.. ကျားကို တောင်ပံတပ်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာ…ဟုတ်တယ်… ကိန်းဂဏန်းတွေ တက်နေတာက နယ်တွေမှာ ရန်ကုန်ပြန်တွေကြောင့်.. နက်ဖြန်ကနေစပြီး နယ်တွေမှာလဲ သွေးရည်ကြည်ကုထုံးနဲ့ အိန္ဒိယကနေ လှူဒါန်းထားတဲ့ ဆေးတွေပေါင်းစပ်ပြီး…ကိုဗစ်ကို စကိုင်တော့မယ်… ကိန်းဂဏန်းတွေကို မေ့လိုက်ကွာ…မသေခင် ဘဝ တလျှောက်လုံးမှာ အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့အခုရက်ပိုင်းလေးမှာ…အိမ်တွင်းပုန်းနေကြပါစို့… ချစ်သူငယ်ချင်းတို့ရေ…ကျန်တဲ့ကိစ္စ ငါတို့တာဝန်ထားလိုက်ပါကွာ…ခဏနေရင် ဝမ်းသာဖို့ကောင်းတဲ့ သတင်းတခု ထပ်တင်ပေးအုံးမယ်… အိမ်ထဲမှာနေပေးကြပါ ရွှေမြန်မာတို့ရေ…..။Credit ဒေါက်တာ Kyaw Thu Ya unicode ဝမျးသာစရာ သတငျးပါ ရနျကုနျအဆငျပွစေပွုနပွေီနျော… ဒီရကျပိုငျးအတှငျး ရောဂါသကျသာလို့ လူနာထောငျဂဏနျးလောကျ … Read more
အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဂျင်း နဲ့ ဒီလို ရှင်းလိုက်ပါ…
အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဂျင်း နဲ့ ဒီလို ရှင်းလိုက်ပါ အဆုတ် ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေ ကို ဂျင်းနဲ့ ဘယ်လို ဖယ်ရှား မ လဲ…?လူတစ်ယောက် အသက်ရှင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်းတွေထဲမှာ အဆုတ် လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဆုတ် ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးပြီး အဆုတ် ကို သန့်စင်အောင် ထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ် သောက်တတ်သူတွေဆိုရင် အဆုတ် ကို သတိထားပြီး အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးသင့်ပါတယ်။ ဂျင်း – ဂျင်းကို အသုံးပြုပြီး အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က တွေ့ရှခဲ့တဲ့ သုတေသနအရ ဂျင်းမှာ အဆုတ်ကင်ဆာ ရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ … Read more
တိုက်ဆိုင်မှု့မဟုတ်ပါ… ဘုရားတဆူတဆူပေါ်ထွက်ဖို့လေးသင်္ချေ ကမ္ဘာတသိန်း ရှစ်သင်္ချေ ကမ္ဘာတသိန်း ဆယ့်ခြောက်သင်္ချေ ကမ္ဘာတသိန်း ဆိုပြီး… ပညာဓိကဘုရား သဒ္ဒါဓိကဘုရား ၊ ဝိရိယဓိက ဘုရားဆိုကာ ဘုရားအမျိုးအစားအပေါ် လိုက်ပြီး ကွာခြားပါတယ်။ တစ်သင်္ချေဆိုတာ ကိန်းဂဏန်းတွေများ လွန်းလို့ချုံ့ပြီး ခေါ်ထားပါ။ တစ်သင်္ချေကိုတစ်နောက်မှာ သုည အလုံးပေါင်း ၁၄၀ ရှိပါတယ် လေးသင်္ချေ ဆိုတော့ တွက်ကြည့်ပေါ့….။ ဘယ်လောက်ကြာသလဲ….။ကမ္ဘာတသိန်းကိုခဏထားဦး တကမ္ဘာသက်တမ်းပဲ တွက်ကြည့်….။ အလျှား ၁၃ မိုင် အနံ ၁၃ မိုင်ရှိတဲ့ ကျောက်တောင်ကြီးကို နှစ်တရာကြာရင် နူးညံ့တဲ့ဝါဂွမ်းလေးနဲ့ တခါပွတ် … နောင်နှစ်တရာကြာရင် တခါပွတ် … Read more
” မင်းလေးပါးဆုံ ရွှေတိဂုံကိန်းကျမည်” ဆိုသော တဘောင်၏ အဓိပ္ပါယ်
” မင်းလေးပါးဆုံ ရွှေတိဂုံကိန်းကျမည်” ဆိုသောတဘောင်၏ အဓိပ္ပါယ် စွန်းလွန်းဆရာတော်သည် ရဟန္တာဟု ကျော်ကြားသလို ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနု၏ကိုးကွယ်ကြည်ညိုသော ဆရာတော်တစ်ပါးလည်း ဖြစ်လေသည်။ ရဟန္တာဟူသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ရှေ့ဖြစ်လာမည့် အရာများကို သိမြင်နိုင်စွမ်း ရှိသလို ပညာဉာဏ် တန်ခိုးများလည်း ပြည်စုံ၏။ ဟုတ်တိုင်း မှန်ရာသာလျှင် မိန့်လေသည်။ ၁၉၄၈ မှ ၁၉၆၂ အထိ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့သော ဦးနုသည် ထိုအချိန်က ကျော်ကြားနေသော( မင်းလေးပါးဆုံ ရွှေတိဂုံကိန်းကျမည့် တဘောင် )အားဆရာတော်ထံ မေးလျှောက်လေသည်။ ဦးနု အမေး။ ။ အရှင်မြတ်ဘုရား ဒီတဘောင်ဟာမြန်မာပြည်မှာ မင်းလေးပါး ပေါ်မှာလား( ဒါမှမဟုတ် )အာဏာလုပွဲ ဖြစ်မှာလား ( ဒါမှမဟုတ် )တခြားတိုင်းပြည်ကမင်းလေးပါး လာဆုံမှာလားဘုရား။ ဆရာတော်အဖြေ။ ။ ဒကာတော်ကြီးဦးနု ထင်သလိုမဟုတ်ပါ။ … Read more
ကြည်ညိုဖို့အရမ်းကောင်းတယ် အိပ်နေတယ်လို့ မထင်လိုက်နဲ့နော်
ကြည်ညိုဖို့အရမ်းကောင်းတယ် အိပ်နေတယ်လို့ မထင်လိုက်နဲ့နော် လျောင်းကမ္မဋ္ဌာန်းကို (၃)နာရီမဟုတ် (၅) နာရီ ကြာ ရှုမှတ်နေကြတာပါ။ကျွန်တော်တို့တွေ နာရီဝက် တစ်နာရီ တရားထိုင်ရင် တောင်ငြိမ်မနေနိုင်ကြတာ။ ကလေးတွေဆိုတော့အိပ်ပျော်ကြမှာပဲဆိုပြီးမထင်လိုက်ပါနဲ့။ တရားနဲ့ပတ်သက်ရင် စိတ်နောက်ကိုယ်မပါစေပဲ စိတ်ကို ကိုယ်လိုရာနောက်သို့ပါအောင်ကြိုးစားပြီး ကျင့်နေကြသော ချစ်စရာကိုရင်လေးများဖြစ်ပါတယ်။ အဓိဋ္ဌာန်စသည့်အချိန်မှ အဓိဋ္ဌာန်ပြည့်သည့်အချိန်ထိ အိပ်ပျော်သွားခြင်း၊လူးလွန့်ခြင်း ပုံပြောင်းသွားခြင်း လုံးဝ လုံးဝမရှိသော ချစ်စရာကိုရင်လေးများ ကို ကြည်ညိုနိုင်ကြစေရန် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။Credit unicode ကွညျညိုဖို့အရမျးကောငျးတယျ အိပျနတေယျလို့ မထငျလိုကျနဲ့နျော လြောငျးကမ်မဋ်ဌာနျးကို (၃)နာရီမဟုတျ (၅) နာရီ ကွာ ရှုမှတျနကွေတာပါ။ကြှနျတျောတို့တှေ နာရီဝကျ တဈနာရီ တရားထိုငျရငျ တောငျငွိမျမနနေိုငျကွတာ။ ကလေးတှဆေိုတော့အိပျပြျောကွမှာပဲဆိုပွီးမထငျလိုကျပါနဲ့။ တရားနဲ့ပတျသကျရငျ စိတျနောကျကိုယျမပါစပေဲ စိတျကို ကိုယျလိုရာနောကျသို့ပါအောငျကွိုးစားပွီး ကငျြ့နကွေသော ခဈြစရာကိုရငျလေးမြားဖွဈပါတယျ။ အဓိဋ်ဌာနျစသညျ့အခြိနျမှ အဓိဋ်ဌာနျပွညျ့သညျ့အခြိနျထိ အိပျပြျောသှားခွငျး၊လူးလှနျ့ခွငျး ပုံပွောငျးသှားခွငျး … Read more
သင့်​အသက်​ဘယ်​​လောက်​လဲ? ဘာ​နေ့​မွေးလဲ?သာမှန်​မှန်​​ပြောပါ…မှန်လွန်းလို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဇနကဟောကိန်း…
သင့်​အသက်​ဘယ်​​လောက်​လဲ? ဘာ​နေ့​မွေးလဲ?သာမှန်​မှန်​​ပြောပါ မှန်လွန်းလို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဇနကဟောကိန်း ဘုရားအလောင်းတော် မဟာဇနကမင်း၏ ဖြစ်စဉ်ခုနှစ်မျိုး အခြေပြု၍ ရှေးဆရာကြီးများက တီထွင်၍ တွက်ကိန်းဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်လွယ်ကူရှင်းလင်း၍ ယနေ့ပညာရှင်များထ်ိ သုံးစွဲနေသော တွက်ကိန်းဖြစ်ပါသည်။ တွက်ကိန်းအား ပုံသေကားချမယူပဲ မဟာဘုတ်စသော အခြားတွက်ကိန်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဟောပြောလျှင် အလွန်အစွမ်းထက်သော ဟောကိန်းဖြစ်သည်။ အဟောကြည့်နည်း…. ဥပမာ – မိမိက တနင်္ဂနွေသားသမီး အခုရောက်သက် ၂၅ နှစ်ဆိုရင် တနင်္ဂနွေ ဇယားကွက်ထဲတွင် ၂၅ ကို ရှာပါ။ * နန်း * အကွက်ထဲတွင်ရှိ၍ ထိုအဟောကိုဖတ်ပါ။ မိမိက တနင်္လာသားသမီး အခုရောက်သက် ၂၀နှစ်ဆိုရင် တနလာင်္ဇယားကွက်ထဲတွင် ၂၀ ကိုရှာပါ။ * ပျက်* အကွက်ထဲတွင်ရှိသောကြောင့် ထိုအဟောကိုဖတ်ပါ။ **တည်​** … Read more
မိမိမွေးသက္ကရာဇ်အရ ထီပေါက်တတ်သည့်လ ပထမဆုံးသိထားရမှာတစ်ခုကတော့ ထီမထိုးသူတွင်ထီပေါက်ကိန်းမရှိဆိုတာပါပဲ။ ဒုတိယသိထားရမှာကတော့ မိမိရဲ့သက်ရောက် ကံအကောင်းခွင်နဲ့ကြုံလို့လည်း ဘယ်လမှာ မဆိုထီပေါက်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ယခုနည်းကတော့ ဆရာတို့နှစ်ရှည် လများ သုတေသန ပြု ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ မိမိတို့ရဲ့မြန်မာလိုမွေးသက္ကရာဇ်ပေါ်မူတည်ပြီး …. ထီဆုမဲပေါက်တတ်တဲ့ကံထူးတတ်တဲ့ လတွေကို ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် စေတနာကောင်းဖြင့် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ မိမိမြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကိုတည် (၇)ဖြင့်စားပါ။ ဥပမာ။ (၁၃၄၅)ခုဖွားဆိုပါတော့ (၇)ဖြင့်စားရင် (၁)ကြွင်းပါတယ်။ (၁၃၇၄)ခုဖွားဆိုရင်(၇)နဲ့စားတော့(၂) ကြွင်း၊ (၁၃၄၁)ဆိုလျှင် (၇)ဖြင့်စားတော့(၄)ကြွင်းပေါ့။ အဲ့ဒီလိုအကြွင်းသိပြီဆိုရင်ရပါပြီ။ (၁)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ (နယုန်)လမှာထီထိုးပါ။ (၂)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ(ဝါဆို)လမှာထီထိုးပါ။ (၃)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ(ဝါခေါင်)လမှာထိုးပါ။ (၄)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ(တော်သလင်း)လမှာထီ ထိုးပါ။ (၅)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ(သီတင်းကျွတ်)လမှာ ထီထိုးပါ။ (၆)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ(တန်ခူး)လမှာထီထိုးပါ။ (၀)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ(ကဆုန်)လမှာထီထိုးပါ။ စေတနာမှန်လျှင်ကံကောင်းမည် ကေဇော်ဟိဏ်း (၀၉၇၆၈၂၅၈၁၇၁) မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်တွက်နည်း ကိုယ့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ် မွေးခုနှစ်ထဲက ( ၆၃၈ ) ကိုနုတ်ပါ။ … Read more
ထီဖွင့်ဖို့ ရက်နီးလာပြီမို့ အစွမ်းထက်မြတ်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်
September 29, 2020 by Padaethar
ထီဖွင့်ဖို့ ရက်နီးလာပြီမို့ အစွမ်းထက်မြတ်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ထီဖွင့်ဖို့လည်းနီးလာခဲ့ပါပြီ ဒါကြောင့် အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ မင်္ဂလာပါ သူဌေး မင်းထီဆိုင်ကြီးမှ ကူးယူဖော်ပြအပ်ပါသည်။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်းတစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားပြီး အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပါယ်အတိုချုပ်က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်က ကောဏ္ဍဝေန မထေရ်ကြီးသည် ပထမစာရေးတံမဲကို အမြဲတမ်း ပေါက်ခဲ့၏ ။ ထို့အတူ ကျွန်ုပ်သည်လည်းဤသို့ ဖြစ်ရပါစေသတည်း ဟု ဆိုထားပါတယ်။ ရှေးဟောင်းပေစာ တစ်ခုထဲမှာလည်း ဒီဂါထာရဲ့ အစွမ်းကို အထူးအစွမ်းထက်မြက်ကြောင်း ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခုဂါထာကို ဆဋ္ဌမအာရုံ ပရိသတ်တွေအတွက် စေတနာရှေ့ထားလို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ် ။ ဂါထာကို မဖော်ပြမီမှာ အရင်ဆုံး ထီပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာရဲ့သီလကို ဆောက်တည်ရပါလိမ့်မယ်။ ဂါထာမန္တန်တွေရဲ့ … Read more
ကိုဗစ်ကာလမှာ ပေါ်လာတဲ့ ရန်ကုန်မြေအောက်လောကတခု (ဒီကိစ္စတွေကတော့ ဖြစ်မှာပဲ)
ကိုဗစ်ကာလမှာ ပေါ်လာတဲ့ ရန်ကုန်မြေအောက်လောကတခု (ဒီကိစ္စတွေကတော့ ဖြစ်မှာပဲ) မြို့ရန်ကုန် ကကြိုးရယ်စုံပါပေ့… မနက်က လိုတာလေးဝယ်ရအောင် ဈေးဖက် ထွက်ခဲ့တယ်… ညက လိုက်အော်ထားလို့နဲ့တူပါရဲ့ လမ်းဘေးဈေးသည် တစ်သည်မှမရှိ… လမ်းထိပ်ရောက်တော့… ကျနော့ ရှေ့ကသွားနေတဲ့ လူက မလုံမလဲနဲ့ ဘေးဘီကြည့်ရင်း… လမ်းထောင့်မှာရပ်နေတဲ့ အိန္ဒိယသား တယောက်နားကပ်သွားပြီး တိုးတိုး တိုးတိုးပြောတယ်… ပြီးတော့( ပိုက်ဆံလို့ထင်တာဘဲ ) ကပ်ပေးလိုက်တယ်… အိန္ဒိယသား(မုတ်ဆိတ်နဲ့)က ဖုန်းထုတ်ပြီးဆက်တယ် … သူ့ကိုလည်း ခဏစောင့်ဖို့ ခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့ပြတယ်…ဟား ဟ… ဒါ… သေချာတယ်… ကိုယ်လည်းရန်ကုန်မှာမွေးတဲ့သူဘဲ… ပေါက်တာပေါ့ ဒီလို အထာမျိုးတွေကို… ကိုယ်ကလည်း ဒါမျိုးဆို သိပ်သိချင်တဲ့ကောင်… ဖုန်းလာသလိုလို ပြောသလိုလိုနဲ့ မယောင်မလည်ရပ်လိုက်ရင်း အခြေအနေကို အကဲခတ်နေလိုက်တယ်… ရွှီ…ကနဲ လေချွန်သံ တချက်အပြီးမှာ နောက်ကတိုက် … Read more
မင်းသားကြီးခန့်စည်သူနဲ့အတူပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အလှူလေးကို ပရိသတ်တွေအား ပြန်လည်ဝေမျှခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး
မင်းသားကြီးခန့်စည်သူနဲ့အတူပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အလှူလေးကို ပရိသတ်တွေအား ပြန်လည်ဝေမျှခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး ပရိသတ်ကြီးရေ ဖြူဖြူထွေးကတော့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ပရိသတ်တွေတ်ာတော်များများကို ပိုင်ဆိုင်ထားကာ ကြော်ငြာတွေအပြင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေလည်း ရိုက်ကူးလာကာ အောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ် လျှောက်လှမ်းနေသူလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဟာသဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေ တင်ရင်း လူအများရဲ့သတိပြုမိခြင်းကိုခံရပြီးနောက်မှာ တော်တော်များများ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ခံခဲ့ရပေမယ့်လဲ သူမရဲ့ဖြူစင်တဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ဖော်ရွေတဲ့ စိတ်ထားလေးကြောင့် ချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း များစွာရှိနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ဇာတိရပ်ရွာမှာလည်း အလှူအတန်းတွေ တတ်အားသ၍ လုပ်ဆောင်နေသူလည်း ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ရိုးသားပွင့်လင်းတဲ့ စိတ်လေးအပြင် မိဘ ဆွေမျိုးတွေ အပေါ် ရိုသေကိုင်းရှိုင်းတဲ့ စိတ်လေးကြောင့် ပရိသတ်တွေပိုချစ်လာပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ပိုရရှိလာတယ်ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ လက်ရှိမှာလည်း ဒီနေ့ ချင်းချောင်းနန်းတော်ဝင် အတွင်း ဝန်ထမ်းများအတွက် အလှူလေးဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့အတူ နိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးခန့်စည်သူနဲ့အတူတူ … Read more